Farihy Buyan (Donau Buyan) any Bali. Indonezia " Journey-Assist
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Indonezia » Bali » Lake Buyan (Donau Buyan)
Farihy Buyan (Donau Buyan) any Bali
Farihy Buyan. Fijery zanabolana
Topimaso momba ny farihy Buyan
Any amin'ny faritra be tendrombohitra any Bedugul no misy azy, 60 km miala an'i Denpasar. Izy io dia iray amin'ireo farihy rano velona 4 any Bali, ampiasain'ny mponina eo an-toerana ho loharano fisotro rano. Amin'ny lafiny atsinanana sy andrefana, misy farihy 2 hafa misy rano velona eo akaiky eo - Bratan sy Tamblingan. Ny volkano Bratan dia eo akaikin'ny morontsiraka atsimon'i Buyan.
Ny velaran'ity farihy ity dia 3,6 sq. km, ary ny halaliny farany dia mahatratra 85 m. Ny fitahirizana dia eo amin'ny haavo 1 m ambonin'ny haabon'ny ranomasina. Noho io antony io dia matetika be ny orana sy ny zavona. Ny fiovaovan'ny maripana mandritra ny iray andro dia mety hisy dikany lehibe.
Voahodidin'ny ala mikitroka ny farihy Buyan. Any akaikin'ny morontsiraka avaratra dia misy làlambe manamorona ny havoana namboarina manokana. Eo amin'ny sisiny misy trano fisakafoanana, kafe sy hotely. Misy ihany koa ireo lampihazo izay ahafahanao mankafy ny fahitana ny farihy. Ny tanànan'i Pankasari dia miorina akaikin'ny morontsiraka atsimoatsinanana. Manana toeram-piompiana maro izy manokana amin'ny fambolena kafe, jirofo, legioma ary voankazo.
Any akaikin'ny morontsiraka atsimon'i Buyan, dia misy firafitra toy ny tranom-borona. Toeram-pambolena rano io toerana io, izay iarahan'ny mponina ao amin'ny tanàna akaiky indrindra.
Zavatra tokony hatao manodidina ny farihy
Tsy dia misy dikany ny fitsidihana an'ity faritra ity ho an'ny farihin'i Buyan irery. Mpizahatany maro no mandalo eto, mankamin'ny toeram-pialan-tsasatr'i Bali avaratra. Tsy mivoatra ny fotodrafitrasa eto, fa ny fotodrafitrasa lehibe, toa ny fivarotana, kafe ary hotely, dia ampy. Amin'ny faritra manodidina, ny mpizahatany dia afaka mandeha milasy, manjono, manao kayak, mandeha an-tongotra ary mitsidika toeram-pambolena.
Any avaratry ny afovoan'i Bali no misy ilay farihy. Eo ankavanan'ny Farihy Bratan. Ny tany dia be tendrombohitra, ary ny haavon'ny farihy ambonin'ny haabon'ny ranomasina dia manodidina ny 1190m.
adiresy: Jalan Danau Buyan II 80226, Sanur, Bali, Indonesia
mandrindra: -8.242353, 115.137602
Lake Buyan amin'ny sari-tanin'i Bali
Ny farihin'i Buyan dia any amin'ny haavo 1190m. Matetika dia manjavozavo sy be rahona izy io.
Farihy Buyan any Bali
Filentehan'ny masoandro eo ambonin'ny Farihin'i Buyan